बैज्ञानिक नाम serpentina: Rauvolfa Benth. ex Kurz नेपाली नाम: सर्पगन्धा अन्य नाम: चाँदमरुवा, पागल वटी, सर्पगन्धा, चंद्रभामा, छोटाचाँद अङ्ग्रेजी नाम: Rauwolfia serpentine root वानस्पतिक परिवार: Apocynaceae
वनस्पति जगतमा सूर्यमुखी फूल प्रजाति असाध्य धेरै छन्। तीमध्ये ४,४५० मिटर माथिको क्षेत्रमा फुल्ने नेपालको रैथाने विशेष सूर्यमुखीलाई कृमान्थोडियम पर्पुरिफोलियम भनिन्छ। यसको पातमा अद्वितीय ढङ्गले वैजनी रङ पोतिएको हुन्छ। हिमाली भीरपाखामा माटो बन्ने प् ...
सानो ताप्रे औषधीय गुण भएको वनस्पति हो । मेथीका जस्ता पात हुने, पहेँला फूल फुल्ने यो जङ्गली वनस्पतिमा तने बोडीका जस्ता कोसा फल्ने गर्दछ । पोथ्रा वर्गमा पर्ने यो वनस्पतिको सूर्य उदाउँदा पात फक्रने र अस्ताउँदा पात जोरिने गर्दछ ।
यो वृक्ष भारतीय उप महाद्विपका वनहरूमा प्राकृतिक रूपमा फैलिएको छ । हिमालयको दक्षिणी भेग, पूर्वमा बर्मा देखि बङ्गलादेश, भारत, नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र, विशेष गरी चुरे पहाड को क्षेत्र भारतको विभिन्न उपउष्णप्रदेशीय क्षेत्रमा फैलिएका वनहरूमा साल ...
सुकुमेल अदुवा परिवारमा पर्ने वनस्पति हो । यो वनस्पति मुख्यत नेपाल तथा भारतमा पाइने गर्छ । यो वनस्पति उष्ण प्रदेसिय क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा तथा रियुनियन, इन्डोचाइना र कोस्टारिकामा प्राकृतिक तरिकाले खेती गरिन्छ ।
वैज्ञानिक नाम: Cinnamomum glaucescens Drury वानस्पतिक परिवार: Lauraceae यो वनस्पति नेपालको रैथाने विरुवा मानिएकोले अग्रेजीमा यसलाई Nepali sassafras भनिन्छ| यो अन्दाजी १५ मी. सम्म अग्लो र ५ फिटसम्म मोटाई हुने सदावहार रुख हो। पात अण्डवृत्ताकार elip ...
वैज्ञानिक नाम अर्किडासीले चिनिने सुनगाभा वानस्पतिक परिवार अत्यन्तै विविधता युक्त तथा संसारभर फैलिएको वानस्पतिक परिवार हो । अर्किड फेमिली भनेर पनि चिनिने यस वानस्पतिक परिवारमा अत्यन्तै रंगिविरंगी तथा वासना युक्त फूलहरू समाहित छन् । सुर्यमुखी परिवा ...
सुपारी एक औषधीय गुण भएको पोथ्रा वर्गमा पर्ने वनस्पति हो । सुपारीलाई विभिन्न कार्यमा प्रयोजन गर्ने गरिन्छ । हिन्दु घर्ममा सिङ्गो सुपारीलाई हिन्दु देवता गणेशको रूपमा पुजा आराधना गरिन्छ । सुपारीका विभिन्न राम्रा तथा नराम्रा पक्षहरु छन् । सुपारीलाई औ ...
सैजन, सहिजन अथवा सजिवन तराई प्रदेशमा हुने अग्ला रूखमा लामा लामा बोडीका आकारका तरकारी खानहुने कोसा फल्ने एक रूख हो । यसको कोसा छिप्पिएपछि चपाएर पानी खाँदा गुलियो हुने भएकोले यसलाई कवाफचिनी अथवा शीतलचिनी पनि भनिन्छ ।नेपाली भाषामा कतै कतै शीतल चिनी ...
आयुर्वेदिक औषधीय पद्दतिमा प्रयोग गरिने त्रिफला तयार गर्नमा प्रयोगमा आउने तीनवटा मध्येको यो एउटा फल हो। यो मध्यम खालको करीब २० मि. सम्म अग्लो हुने पतझर खालको रुख हो। यसका पातहरू ७–२० से. मी. सम्म लामा र ४–८ से. मी. चौडा हुन्छन् र एउटै आँख्लामा दुई ...
बिरालो वा घरपालुवा बिरालो एक मांशाहारी तथा स्तनधारी समुहमा पर्ने जनावर हो । । यसले मुसाहरूलाई मारेर अन्नको रक्षा गर्दछ । बिरालो धेरै प्रजातीका हुन्छन् । कसै कसैले बिरालो शौकको लागि पालिएको देखिन्छ । बिरालो पाल्ने मानिस तथा समुदायलाई आत्मनिर्भर मा ...
कुकुर घरपालुवा स्तनधारी जनावर हो । घरको सुरक्षाका लागि पालिने कुकुरलाई स्वामी भक्त प्राणीको रूपमा लिइन्छ र यो मानिसहरूसँग अत्यन्त मिलेर बस्न सक्दछ । कुकुरको सुन्ने र सुँघ्ने शक्ति अत्यन्त तिक्ष्ण हुन्छ । घरको रेखदेखको लागि पालिने कुकुर मानिसहरूले ...
कोअला अस्ट्रेलियामा मात्र पाइने एक साकाहारी जनवार हो। यो अष्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड, न्यु साउथ वेल्स, भिक्टोरिया र दक्षिण अस्ट्रेलियामा पाईन्छ। यो रुखमा बस्ने एक मार्सूपियल हो।
चिकित्सकीय भाषामा मस्तिष्कको विकासका बेला हुने विकारको कारण सामाजिक संबन्ध तथा सञ्चार मा देखिने सुस्तता लाई अटिज्म स्प्रेक्टम डिजअर्डर भनिन्छ । अटिज्म रोग नभएर एउटा अवस्था हो । स्वभावजन्य असामान्यता, सामाजिक अन्तरक्रियामा कमी र सञ्चार/सम्वादमा अभ ...
अतिताप, तापमान नियन्त्रणको विफलताको कारण शरीरको बढेको तापमान हुन्छ। अतिताप तब हुन्छ जब शरीर तापको अपव्यय गर्नको आफ्नो क्षमता भन्दा अधिक तापको उत्पादन गर्दछ या अवशोषित गर्दछ। जब शरीरको तातोपन एकदम धेरै हुन्छ, तब आपतकालीन चिकित्साको स्थिति हुन्छ र ...
अफ्रिकन ट्रिपानोसोमियासिस वा निद्रा रोग मानिसहरू र अन्य जनावरहरूमा हुने एउटा सरुवा रोग हो। यो प्रजातिको परजीवी ट्रिपानोसोमा ब्रुसेइ द्वारा हुने गर्दछ। यीनीहरू दुई प्रकारका छन् जसले मानिसहरूमा संक्रमण गर्छ, ट्रिपानोसोमा ब्रुसेइ ग्याम्बाइन्स र ट्रि ...
अवर्धनात्मक रक्त अल्पता त्यस्तो शारिरिक अवस्था हो जसमा रगतमा सेतो रक्तकण को कमी भै मानिसको रोगसँग लड्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ। साधारणतया हड्डीको मासीले पर्याप्त रूपमा सेतो रक्तकण उत्पादन गर्न नसकेका कारण यो रोग हुन सक्छ।
चिकित्सालय या अस्पताल स्वास्थ्यको देखभाल गर्ने संस्था हो। यसमा विशिष्टता प्राप्त चिकित्सकहरू एवं अन्य स्टाफहरूद्धारा तथा विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूको सहायताले रोगीहरूको निदान एवं चिकित्सा गरिन्छ।
आँउ दुई किसमको हुन्छ। ती निम्ननुसार छ्न । एमेविक आउ एमेविक आँउ इ-कोलि तथा एन्टोमिवा हिस्टोलाईटिका भन्ने प्यारासाइटबाट हुने गर्दछ। यसमा प्रजिविहरु मानिसको शरीरमा प्रवेश गरेको २हप्ता देखि धेरै वर्ष सम्म लक्षण देखापर्दछ।
एड्स एउटा यस्तो लक्षण हो, जुन एचआइभीले गर्दा शरीरमा उत्पन्न हुन्छ।यो एक यौन संक्रमित रोग हो। जथाभावी यौनसम्पर्क राख्दा मानिसहरू यो भाइरसको सिकार हुने गर्दछन् । तर यो भाइरस संक्रर्मित व्यक्तिबाट स्वस्थ मानिसमा यौनसम्पर्कको माध्यमबाट मात्र नभइ निर् ...
कब्जियत पाचन प्रक्रियामा गडबडीका कारण हुने एक रोग हो । मल निष्कासनको स्वभाविक आवृतिमा विलम्ब हुनु, नियमित रूपले मल त्याग गर्न नसकी बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु वा दैनिक एकपटक पनि कोमल दिसा गर्न नसकेको अवस्थालाई कब्जियत भनिन्छ। विशेष रोगावस्था ...
किशोरावश्थाको गर्भधारण बीस वर्ष भन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुनु हो। किशोरावश्थाको गर्भधारण विश्वका धेरै मुलुकहरूमा समस्याको रूपमा देखा परेको छ। खासगरी विकासउन्मुख देशहरूमा बढि देखिने यो समस्या नेपानमा पनि उत्तिकै छ। नेपलामा धेरै महिलाको २० वर्ष नपुग ...
क्रुप सामान्यतया माथिल्लो श्वास मार्गको घातक भाइरल सङ्क्रमणको कारणले हुने एउटा श्वास प्रश्वासको अवस्था हो। सङ्क्रमणले घाँटी भित्र सुन्निने अवस्थासम्म पुर्‍याउँछ, जसले सामसन्य श्वास प्रश्वासमा बाधा उत्पन्न गर्छ र खोकी, घाँटी बस्ने जस्ता सामान्य लक ...
इम्प्लान्ट महिनावारीको पहिलो सात दिनभित्र महिलाको पाखुराको छालाभित्र घुसाएर राख्ने गर्भ निरोधक परिवार नियोजनको साधन हो । यो साधन गर्भ धारण रोक्नका लागि धेरै सुरक्षित र भरपर्दो मानिन्छ । नेपालमा यो दुई प्रकारमा उपलब्ध छन् १. जेडेल पाँच वर्षलाई २. ...
गर्भपतन भन्नाले महिनावारी भएको दिनबाट गणना गर्दा २८ हप्ता भन्दा पहिले गर्भमा भएका भ्रुण, विकसित भ्रुण अथवा शिशु बाहिर निस्कने प्रकृयालाई बुझिन्छ । जुनसुकै गर्भावस्थाको गणना गर्दा महिनावारी भएको पहिलो दिनबाट गणना गरिन्छ । उक्त दिनबाट २८० दिन वा ४० ...
चिकिनगुनिया अफ्रिकी शब्द हो, जसको शाब्दिक अर्थ मोडिदिनु हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लूएचओ का अनुसार चिकनगुनिया भाइरसबाट हुने संक्रमण हो । यो लामखुट्टेको सहयोगले सर्छ । यो संक्रमण एडिस एजिप्टी र एडिस एल्वोपिक्टस जातको संक्रमित लामखुट्टेले टो ...
छारे रोग मानिसलाई मात्र नभएर पशु समेतमा देखा पर्ने एक किसिमको मानसिक रोग हो। यो रोगलाई मृगी, चडिफाउ, फफडके, रिङ्ने, आदी विभिन्न नामहरू दिएको पनि पाइन्छ। प्राय जसो कमजोर दिल भएका व्याक्तीहरूलाई छारे रोगको रोगको सम्भावना बढी हुने अनुमान गरिएको छ। य ...
जनै खटिरा एक प्रकारको भाइरल सङ्क्रमण हो। यसलाई पीडादायक समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ। किनभने छालामा देखिने यो रोगमा स-साना पानीफोका जस्ता आउने खटिराहरू चिलाउनुका साथै असह्य रूपले दुख्ने समस्या हुन्छ। चिकनपोक्स अर्थात् ठेउलाको कारकका रूपमा परिचित भेर ...
जलवियोजन भन्नाले मानव शरीरमा भएको तरल पदार्थको अत्याधिक क्षति भन्ने बुझिन्छ। विभिन्न रोगहरूका कारण मानव शरीरमा भएको पानी, नुन र पोषक तत्त्वहरू खेर गई शरीर शिथिल अवस्थामा पुग्नुलाई जलवियोजन भएको भनिन्छ। जलवियोजन भएपछि रोगीहरू झिँजिने, झर्कोमान्ने, ...
सौन्दर्य तथा छाला रोग विशेषज्ञका अनुसार सामान्य डन्डिफोर छालासँग सम्बन्धित समस्या हो।चढ्दो जवानीसँगै हर्मन चलायमान र वृद्धि पनि हुन्छ। हर्मनको एक्टिभिटी बढ्दा मानिसमा शिवासिया ग्रन्थि पनि बढ्छ। यसले डन्डिफोर देखिन्छ। यो ग्रन्थीको कारण बढेको डन्डि ...
डाउन सिन्ड्रोम भनेको जन्मजात उपचार नहुने क्रोमोसोम असामान्यता हो । यो अवस्था क्रोमोसोम-२१ मा एउटा अतिरिक्त क्रोमोसोमको पूरा वा सानो अंश जोडिएको कारणले हुन्छ । यसलाई ट्राइसोमी-२१ पनि भनिन्छ । सामान्य व्यक्तिमा ४६ क्रोमोसोम हुन्छ भने डाउन सिन्ड्रोम ...
डिप्रेसन भनेको खाली मन उदास हुनु मात्र नभइ त्यस भन्दा अझ बढी हो । यो मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयरोग आदि जस्तै एउटा रोग हो । यो रोगले हाम्रो सोचाई, भावना तथा व्यवहारमा असर गर्दछ । डिप्रेसन वा उदासिनता मानिसलाई हुने प्रमुख रोगहरूमध्ये एक हो । डिप्रे ...
तीव्रग्राहिता एउटा गम्भिर एलर्झी सम्बन्धी प्रतिक्रिया हो जो तीव्र रूपमा फैलिई मृत्यु समेत गराउन सक्दछ। यसले सामान्यतया चिलाउने, खटीरा आउने, घाँटी सुन्निने तथा कम रक्तचाप जस्ता लक्षणहरू देखाउँछ। साधारण कारणहरूमा किराको टोकाइ/डसाइ, खानाहरू, तथा औषध ...
दम रोगभन्दा पनि रोगहरूको लक्षण हो। यो रोगमा श्वासनली वा वरिपरिको जोडिएको खण्ड सुन्निन्छ। यस कारणले फोक्सोमा हावा जान कठिनाइ हुन्छ।जतिखेर एलर्जन्स र इरिटेटस सास नलीको सम्पर्कमा आउँछन्, त्यसपछि सास फेर्न समस्या हुन थाल्नु नै दम हो।
दूध एक पोषक तत्वयुक्त सेतो तरल पदार्थ हो जुन पोथी स्तनपायी प्राणीहरूको स्तन ग्रंथिहरूले उत्पादन गर्दछ । यो अन्य प्रकारका खाना पचाउन सक्नु अघि शिशु स्तनपायी जन्तुहरू को लागि पोषणको प्राथमिक स्रोत हो । नवजात शिशुहरू प्राय जसो दूधमा निर्भर हुने गर्छ ...
धनुष्टंकार धनुष्टंकार क्लस्त्रिडिउम टिटानी नामक ब्यक्टेरियाको सङ्क्रमणले हुन्छ। धनुष्टंकार प्राय: बच्चालाई लाग्ने रोग हो। मानिस, गाई, घोडा, बाख्रा जस्ता जनावरको दिसा, खिया लागेका हतियार, प्रदुशित माटो वा बच्चाको नाइटोबाट शरीरभित्र जीवाणु प्रवेश ग ...
साना शिशुको पर्याप्त हेरविचार अत्यावश्यक छ किनभने उनीहरू आफ्ना बारेमा केही पनि बताउन सक्दैनन्। शिशुको सही हेरचाह गरे उसको मनमा भएको कुरा सही ढंगमा बुझ्न- जान्न सकिन्छ। शिशुको विशेष केयर जन्मिएपछि साढे दुई वर्षको उमेरसम्म गर्नुपर्छ। शिशु हेरचाहको ...
अस्पताल हरूको विकास संगै नेपालका मेडिकल कलेज हरूले श्वास्थ क्षेत्रमा कामगर्ने थुप्रै शक्ति पनि उत्पादन गर्ने गरेका छन तर अझै पनि नेपालमा सबै अस्पताल हरूमा सुलभ तरिकाले चिकीत्सक तथा श्वास्थकर्मी पुग्न सकेका छैनन। नेपालमा हाल थुप्रै निजी, सामुदायीक ...
पञ्चकर्म आयुर्वेदको उत्‍कृष्‍ट चिकित्‍सा विधि हो। पञ्चकर्मलाई आयुर्वेदको विशिष्‍ट चिकित्‍सा पद्धति पनि भनिन्छ। यस विधिबाट शरीरमा लाग्ने रोगहरूको कारण जुन वात, पित्त, तथा कफ हुन्छ यी तीन दोषहरु अर्थात् त्रिदोषहरुका असम रूपलाई समरूपमा पूर्ववत् स्था ...
फोक्सोमा हुने एक प्रकारको समस्या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो । पल्मोनरी फाइब्रोसिसले गर्दा फोक्सोको कोसिकामा दाग पैदा गर्छ । फोक्सोको दागले गर्दा अक्सिजनको मात्रा कम गर्दछ । जसले गर्दा विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी हुदा जस्तै: व्यायाम गर्दा, हिँड्दा, दौ ...
पसिना छालाको भित्री पत्रमा रहेको ग्रन्थिबाट बन्छ। यो ग्रन्धिको काम शरीरको तापमानलाई नियन्त्रण गर्नु हो। छालाको माथिल्लो सतहमा नुनमुक्त पानी उत्पन्न हुन्छ र यही नै हो पसिना। सामान्यतया महिलाको दाजोमा पुरुष हरूमा धेरै पसिना आउछ | कसरी आउँछ पसिना पस ...
कुनै पनि व्यक्तिको मानसिक सन्तुलन धेरै बिग्रेको खण्डमा व्याक्ती पागल हुन्छ अथवा बौलाहा हुन्छ। व्याक्तीको यस्तो अवस्थालाई पागलपन भनिन्छ। पागलपन मानसिक रोगबाट हुने एक खतरा हो। पागल व्याक्तिले असामाजिक र अनैतिक जस्ता कामहरू गर्छ। जस्तै:- चिल्लाउने, ...
पायल्स सामान्यतया पायल्स रोग त्यस्तो रोग हो जुन मलद्धारसँग सम्बन्धित छ । मानिसहरूको भिन्न जीवनशैली र खानपानले गर्दा थुप्रैलाई आजकाल धेरै प्रकारको रोग लाग्ने गर्दछ। यसमध्ये पायल्स रोग धेरै मानिसहरूको समस्या भएको छ। लोकलाजका कारण धेरै मानिसहरूले पा ...
पिनास नाकको भित्र दायाँबायाँ रहने खाली ठाउँमा अवरोधका कारण हुने रोग हो। नाकको नजीकै अनुहारको हड्डिहरूको भित्र नम हावाको रिक्त स्थान हो, जसलाई वायुविवर अथवा साइनस sinus भन्छन्। साइनसमा पातलो झिल्लीको तह हुन्छ। जब कुनै व्यक्तिलाई रूघा तथा एलर्जी हु ...
पोलेको घाउ भन्नाले छाला वा अन्य तन्तुहरूमा तातो, चिसो, विद्युत, रसायन, घर्षण वा विकिरणका कारणले हुने घाउलाई चिनिन्छ। प्रायजसो पोलेको घाउ तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ वा आगोबाट निस्किने तातोले गर्दा भएको पाइन्छ। महिला र पुरुषमा यो समस्या बराबर मात्रामा ...
प्यानिक अट्याएक प्रकारको एन्जाइटी डिसअर्डर हो । जसमा कहिलेकाहीँ कुनै प्रकारको डर अथवा फोबिया पनि अट्याकको कारण बन्न सक्छ । यसबाहेक चिन्ता, उदासीनता, निरासा जस्ता कारणहरूले पनि प्यानिक अट्याक हुन सक्छ । व्यस्त जीवनशैलीले मानिसहरूको जीवनशैली तनावयु ...
कायरो सम्मेलन १९९४ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले बिरामी वा रोगबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पूर्णरूपमा स्वस्थ्य रहनु हो साथै प्रजनन प्रणाली, यससको कार्य र प्रजनन प्रक्रियाको सन्दर्भ ...
प्रसूति स्वास्थ्यको लागि विशेष त हरेक गाविसको हरेक वडामा एक महिला स्वास्थ्यकर्मि रहेका छन्। जसले गर्भवती महिलालाई चाहिने सल्लाह सुझाव दिनुका साथै बच्चा जन्मने समयमा परिआएको खन्डमा प्रसूति गृह सम्म पनि जन र लान सहयोग गर्छिन ।
प्राथमिक उपचार भन्नाले बिरामी अथवा घाइतेलाई अस्पताल अथवा स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउनु अघि गरिने उपचारलाई बुझिन्छ । प्राथमिक उपचार भनेको प्रथम उपचार अथवा सुरुमा गरिने उपचार हो । कुनै पनि घटनास्थलमा चिकित्सकको आगमन अघि सामान्य उपकरण तथा सामग्रीको प ...
प्रोटिन मानिसको शरीरको लागि अति आवश्यक पौष्टिक तत्व हो । प्रोटिन को मात्रा अत्यधिक भएमा हानि पनि गर्दछ| मानव शरीर लाई र धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा मिर्गौलाको लागि खतरा हुनेछ ज्यादा प्रोटिन भएका खाना खाने व्यक्तिलाई शाकाहारी भोजन गर्नेकोभन्दा ज्या ...